အတတ်ပညာ China Wood router atc စက်ရုံနှင့် ထုတ်လုပ်သူ |JCUT
1. ဗလာကျင်းခြင်း၊ တူးဖော်ခြင်း၊ ဖြတ်တောက်ခြင်း၊ ဦးဆောင်အစွန်း၊ ကြိတ်ခြင်းစသည်ဖြင့်၊ ဓားအောက်တွင် ခေါင်းလှည့်ခြင်း လေးခု၊ ပြတ်တောက်မှုမရှိသော ဓါးပြောင်းလဲခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်၊ အလိုအလျောက်စနစ်အောင်မြင်ရန်။
2. ထိန်းချုပ်မှု မျက်နှာပြင် ဒီဇိုင်း လူသားဆန်မှု၊ မိုက်မဲသော လည်ပတ်မှု၊ အော်ပရေတာများသည် ရိုးရှင်းသော လေ့ကျင့်မှု ပြီးနောက် အလုပ်တွင် လုပ်နိုင်သည်၊ နည်းပညာ လုပ်သားများ မလိုအပ်ပါ။ စက်သည် သွက်လက်စွာ ရွေ့လျားသည်၊ ထိရောက်မှု မြင့်မားသည်၊ ကုန်ထုတ်စွမ်းအား ခုန်တက်မှုကို နားလည်ရန် ကူညီပေးသည်။စက်သည် HQD စွမ်းအားမြင့် လေအေးပေးထားသော ဗိုင်းလိပ်တံ၊ ဆာဗာဒရိုက်စနစ် အပြည့်အစုံ၊ မူလတင်သွင်းလာသော လျှပ်စစ်အစိတ်အပိုင်းများနှင့် အခြားအစိတ်အပိုင်းများ၊ တည်ငြိမ်သော စွမ်းဆောင်ရည်ကို လက်ခံပါသည်။
3. လေဟာနယ် စုပ်ယူမှု ဇယားအတွက် ဇယား၊ မတူညီသော ဧရိယာများကို စုပ်ယူနိုင်သည်၊ သေးငယ်သော ပန်းကန်ပြားကို ရွှေ့ပြောင်းခြင်းမရှိဘဲ လုပ်ဆောင်ခြင်း၊ မျက်နှာပြင် ချောမွေ့ခြင်း၊ ပန်းကန် အရွယ်အစား တိကျပါသည်။
4. လျှပ်စစ်ဆီဖြည့်ခြင်း၊ အလိုအလျောက်ဆီ၏အချိန်အတိုင်းသတ်မှတ်နိုင်ပြီး၊ slider ခဲရထား၏ချောဆီသေချာစေရန်၊ ဝန်ဆောင်မှုသက်တမ်းကိုတိုးစေသည်။ထိုင်ဝမ်တွင် တိကျသောစတုရန်းမျဉ်းမျဉ်းလမ်းညွှန်ရထားလမ်း၊ တိကျမှန်ကန်မှု၊ ရှည်လျားသောဝန်ဆောင်မှုသက်တမ်း၊ ကြီးမားသောထိတွေ့မျက်နှာပြင်၊ ခိုင်ခံ့သောဝန်ထမ်းစွမ်းရည်၊ ဒေါင်လိုက်ရထားလမ်းနည်းပညာကို လက်ခံကျင့်သုံးခြင်းသည် လည်ပတ်တည်ငြိမ်မှုကို ပိုမိုကောင်းမွန်စေနိုင်သည်။
4. လေးလံသော gantry၊ ဖြတ်တောက်ပြီး Planer စီမံဆောင်ရွက်ပြီးနောက် စတီးပြားကို အားဖြည့်ပြီး ထူထဲစေကာ ဂဟေဆက်ခြင်း၊ ဆင့်ပွား အပူပေးသည့် ကုသမှုနှင့် ညီမျှသော gantry တာရှည်ခံနိုင်စေရန်၊ ပုံပျက်ခြင်းမရှိဘဲ အလုပ်လုပ်ပါ။
5. ဘေးဘက်ပန်းကန်ပုံပျက်ခြင်းမှကာကွယ်ရန်နှင့် Y-ဝင်ရိုး၏ခရီးသွားလာမှုတိကျမှုကိုထိခိုက်စေရန်အတွက် ပေါင်းစပ်သွန်းသံဘေးဘက်ပန်းကန်ကို အပူချိန်မြင့်မားသောအပူချိန်ဖြင့် ကုသထားသည်။
ဘုတ်ပရိဘောဂ၊ ဗီရို၊ ဗီရို၊ ရုံးသုံးပရိဘောဂ၊ စိတ်ကြိုက်ပရိဘောဂ။ Wardrobe ဗီရိုကို အခြားသူ၏အနေအထားတွင် ကက်ဘိနက်တွင် မိမိကိုယ်မိမိ ထား၍ အခြားသူ၏အနေအထား၊ ခုံမင်၊ စားပွဲခုံ၊ ဘုတ်အမျိုးအစား ပရိဘောဂ၊ ရုံးပရိဘောဂ၊ သစ်သားသေတ္တာ၊ သစ်သားမီးဖိုချောင်သုံး ပစ္စည်းများ၊ သုံး၊ Dimensional wave board processing၊ Cabinet တံခါး၊ လက်မှုသစ်သားတံခါး၊ Wenqi တံခါး၊ ခေါက်စခရင်၊ panel ပရိဘောဂ လေယာဉ်ပျံဖြတ်တောက်ခြင်း၊ ကြိတ်ခွဲခြင်း၊ အနားသတ်၊ အမဲစက်၊ ပန်းပုနှင့် အခြားအရန် ပရိဘောဂပစ္စည်းများ ကဲ့သို့သော ပရိဘောဂပစ္စည်းများကို ထွင်းထုခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်။
အဆင့်မြင့် R9 ATC CNC ဖြတ်တောက်ခြင်းစက်
ဗိုင်းလိပ်တံ HQD 9KW လေအေးပေးစက် ATC ဗိုင်းလိပ်တံ+HQD5*4 CNC drill ပက်ကေ့
Tool မဂ္ဂဇင်း 12 position servo disk hat type auto tool changer magazine
မော်တော် ဂျပန် Yaskawa 850w AC ဆာဗာမော်တာ
ဒရိုက်ဘာ ဂျပန် Yaskawa 850w မောင်းနှင်ခြင်း။
Linear ရထားလမ်း X၊Y၊Z ဝင်ရိုးသည် 25 Hiwin Linear ရထားလမ်းကို လက်ခံသည်။
ထိန်းချုပ်မှုစနစ် ထိုင်ဝမ် Syntec 6MB အီလက်ထရွန်းနစ် လှည့်ပတ်မှုစနစ်ပါရှိသော ထိန်းချုပ်မှုစနစ်
လုပ်ဆောင်ချက်ကိုရှာပါ။ ပစ္စည်းများ L အမျိုးအစားတည်နေရာရှာဖွေခြင်းလုပ်ဆောင်ချက်၊ အဘက်နှစ်ဖက်ရှိ အလူမီနီယမ်ပရိုဖိုင်းများကို နှစ်ချက်ဖြင့် အရန်အစာကျွေးသည့်ပစ္စည်းများ၊ တွန်းပို့သည့်လုပ်ငန်းစဉ်တွင် ပန်းကန်ပြားသွေဖည်မှုပြဿနာကို ဖြေရှင်းပေးသည်။
ယခင်- 1325 linear ATC ပါသော ချည်လုံးလေးလုံး
နောက်တစ်ခု: Linear atc cnc router
Atc Cnc Router စက်စက်ရုံများ
Topdirect Cnc Router စက်